I-Urolithin A powder ehamba phambili (1143-70-0) - Umkhiqizi nefektri
ICofttek ingumkhiqizi we-Urolithin A omuhle kakhulu e-China. Ifektri yethu inohlelo oluphelele lokuphathwa kokukhiqiza (i-ISO9001 & ISO14001), enekhono lokukhiqiza nyangazonke elingu-400kg.
Imininingwane ye-Urolithin A powder
Igama: I-Urolithin A
Chemical igama: I-3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-eyodwa
Indlela yamakhemikhali: C13H8O4
Umbala: I-white to powder off-white
Ukhiye we-InChi: I-RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
Amakhodi we-SMILES: O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=C(O1)C=C(O)C=C3
umsebenzi: I-Urolithin A, i-gut-microbial metabolite ye-ellagic acid, ine-anti-immune, antiproliferative kanye ne-antioxidant. I-Urolithin A yenza i-autophagy ne-apoptosis, icindezele ukuqhubeka komjikelezo weseli, futhi ivimbela ukuvela kwe-DNA.
Isicelo: I-Urolithin A iyi-metabolite ye-ellagitannin; AbaPhakathi Bemithi
Umswakama: I-soluble ku-DMSO (3 mg / mL).
Isitoreji Sokugcina: Okomile, okumnyama naku-0 - 4 C isikhathi esifushane (izinsuku kuya emavikini) noma -20 C isikhathi eside (izinyanga kuya eminyakeni).
I-Urolithin A I-NMR Spectrum
(1) Ingangezela isikhathi sokuphila
I-Urolithin A ifaka i-mitophagy ngokukhetha ukususa i-mitochondria eyonakalisiwe. Lokhu futhi kuqinisekisa ukwenziwa kabusha kwe-mitochondria yokusebenza kahle. IMitochondria imvamisa ilimala ngeminyaka futhi futhi ngenxa yengcindezi. Ukuqeda i-mitochondria eyonakalisiwe kudlala indima ekwandiseni isikhathi sokuphila.
Ekutadisheni izibungu, i-urolithin Isengezo esilawulwa ku-50 µM kusuka esigabeni seqanda kuze kube sekufeni kutholakele ukwelula isikhathi sabo sokuphila ngo-45.4%.
Kwesinye isifundo esenziwe ngo-2019 kusetshenziswa ama-fibroblasts womuntu we-senescent, i-urolithin A supplement yatholakala ukukhombisa amandla wokulwa nokuguga. Ikwazile ukwandisa uhlobo lwe-1 collagen expression futhi yehlisa nencazelo ye-matrix metalloproteinase 1.
Ucwaningo oluncane lwabantu lubonisa nokuthi i-UA yayikwazi ukuthuthukisa ukusebenza kwe-mitochondrial nempilo yamathambo kubantu asebekhulile lapho iphathwa ngomlomo ku-500-1000mg isikhathi esingamasonto amane.
(2) Siza ukuvimbela umdlavuza wendlala yesinye
Ama-urolithin kanye nomanduleli wawo, ama-ellagitannins, anezinto ezilwa nomdlavuza. Bayakwazi ukuvimbela ukwanda komdlavuza weseli ngokuboshwa komjikelezo wamaseli nangokufaka i-apoptosis. I-Apoptosis isho ukufa okuhleliwe okuhleliwe lapho umzimba ususa khona umdlavuza-amaseli namanye amaseli angenwe yileli gciwane.
Ocwaningweni lwamagundane ajovwe ngamaseli womdlavuza womuntu, kwatholakala ukuthi i-ellagitannins metabolites (Urolithin A) ivimbela ukukhula komdlavuza wendlala yesinye. Ucwaningo luphinde lwabika ukugcwala okuphezulu kwama-metabolites emzimbeni we-Prostate gland, colon kanye nezicubu zamathumbu.
(3) Ukuthuthukiswa kwengqondo
I-Urolithin A iyakwazi ukuvikela ama-neurons ekufeni futhi ingadala neurogeneis ngokusebenzisa ukusayina okulwa nokuvuvukala.
Esifundweni samagundane kanye nokukhubazeka kwememori, kutholakale ukuthi i-urolithin A ilungisa ukungalungiswa kwengqondo futhi ivikele nama-neurons ekuqopheni. Lokhu kuphakamisa ukuthi i-UA ingasetshenziswa ekwelapheni isifo se-Alzheimer's (AD).
(4) Amandla wokulwa nokukhuluphala
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-ellagitannins ayakwazi ukuvimba ukuqongelela i-lipid futhi amaka we-adipogenic anjenge-protein ukukhula kwe-protein 2 kanye ne-protein-binding binding ngokubopha umjikelezo weseli.
I-Urolithin A itholakele ngqo ukuze ithuthukise umuzwa we-insulin ngaleyo ndlela ivimbela ukuthuthukiswa kokukhuluphala.
Ocwaningweni lwamagundane anesifo sokukhuluphala, i-urolithin A supplementation yatholakala ukuvikela ukukhuluphala okubangelwa ukudla kanye nokuphazamiseka kwe-metabolic kumagundane. Ucwaningo luveze ukuthi ukwelashwa kwe-UA kwandisa izindleko zamandla ngakho-ke isisindo somzimba esiphansi.